समृद्धिको आधारः उद्यमशीलता | Jwala Sandesh
कविराज खत्री | प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ २०, २०७५ ::: 969 पटक पढिएको |
यतिखेर ‘समृद्धि’ शब्दले निकै चर्चा पाएको छ । कुनै दिन श्री ३ भन्ने शब्दले चर्चा पाएको थियो । त्यस पछि सबै पंच नेपाली सबै नेपाली पंच भन्ने शब्दले चर्चा पाएको थियो । शब्दहरुले चर्चा पाउँदै जाँदा वहुदलिय ब्यवस्था आयो । त्यस बखत खासै कुनै शब्दले चर्चा पाउन सकेन भने वहुदलको न्वारन भईसके पछि ‘जनयुद्ध’ शब्दले चर्चा पायो । जब मूलकमा पूँजीवादी गणतन्त्र स्थापना भयो, त्यस पछि समृद्धि शब्दले निकै चर्चा पाएको छ । नेपालको राजनीति शब्दभण्डारको खेल हो । किनभने यी र यस्तै शब्दहरुको इतिहास हेर्दा त्यस्तै अनुभूती हुने गर्दछ ।
तथापी हामीहरुले द्वन्द्ववादी तरिकाले हेर्दा विश्वास र शंखा दुवै गर्नु पर्दछ । प्रगती हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नु पर्दछ । वास्तवमा हामी जनताले सोचे अनुसारको प्रगती किन हुन सकेन ? यसका केही ठोस कारणहरु रहेकाछन । त्यस मध्येको पहिलो कारण हो हामी जनता भनिने जात नै सुस्त मनस्थिती भएका, परम्परावादी सोचबाट अघि बढेका र अरुलाई ठूलो देख्ने र आफुलाई सानो देख्ने प्रवृत्ती भएका, आचरणमा भ्रष्टिकरण भएका, अज्ञानताको सिकार भई ज्युँदै मरेको लास भएका, परनिर्भरता र दमन, अन्याय, अत्याचार जति पनि सहन सक्ने तर न्यायका लागि दुरदृष्टिका आधारमा संगठित हुन नसक्ने आदि इत्यादि परिभाषा हाम्रो पहिचान हो । दोस्रो कारण नेपालका सत्ताधारी, विपक्षी अर्थात राजनीतिक नेताहरुसित सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना नहुनु । अर्थात ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रदान पक्ष र सामाजिक स्वार्थ गौण पक्ष बनाएर ब्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको पाईन्छ । जसका कारण देशमा चाहेजस्तो शासन आउन सकेको छैन । तेस्रो कारण अधिकांश कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र कमाउवादमा लतपतिनु । यस विषयमा यति नै चर्चा गर्दा उपयुक्त होला ।
क) उर्जा :
ख) उद्यमशीलता :
ग) उद्योग :
घ) संरचना :
ङ) बजारीकरण :
च) लगानी :
समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि यी छ वटा आधारभूत सर्त हुन । यदि जीवित र जनपक्षिय राज्य छ भने राज्यका तीनै तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले हामीजस्ता उद्यमीहरुका यी कुरा सुन्नु पर्दछ । कुरा सुन्ने मात्र होइन, यी विषयमा रहेर ठोस काम गर्नु पर्दछ । नारामा समृद्धिका कुरा गर्ने र ब्यवहारमा काला कर्तुतहरु प्रस्तुत गर्ने हो भने समृद्धिको आधार तयार हुन सक्दैन ।
जसले जुन कुरा गरे पनि समृद्धिको आधार ः उद्यमशीलता नै हो । हरेक नेपाली उद्यमशील नभए समुन्नत, समृद्ध, आत्मनिर्भर समाज बन्न कक्दैन । ब्यापार नाफा कमाउनका लागि गरिने कार्य हो भने उद्यम समुन्नत, स्वरोजगार, समृद्ध र आत्मनिर्भर समाज बनाउन गरिने कार्य हो । यहि कुराको मनन हामी सबैले गर्न आवश्यक छ । अन्त्यमा यी विषयहरुका माध्यमबाट कसरी समृद्धि आउनसक्दछ ? तथ्याङ्क सहित अर्को आलेख लेख्ने जानकारी गराउँदै उठान भएका यी विषयमा सबैलाई गम्भीर हुन अनुरोध छ ।